आमाको मृत्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेपछि बिच्चली – Classic Khabar
May 27, 2021 181
बडिमालिका नगरपालिका–२ माझीगाउँमा नाबालक चार भाइबहिनी अलपत्र परेका छन् । आमाको मृत्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेर भारत गएपछि चार भाइबहिनी अलपत्र रहेको वडाध्यक्ष डम्मर महतले बताउनुभएको छ ।
यतिबेला नाबालक चार दलित भाइबहिनी बुढा बाजे अर्जुन दमाई र बज्यै बिस्नाको संरक्षणमा रहेका छन् । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको अर्जुन दमाईको परिवारलाई नाबालक नाति नातिनी पाल्न निकै समस्या भएको छ । गाउँभरि डुलेर अरुसँग मागेर नाति नातिनाको पेट भर्ने काम गरेको बज्यै बिस्ना बताउनुभयो ।
कहर बढेसँगै लकडाउनका कारण उनीहरुमा झनै समस्या थपिएको छ । लकडाउन नहुनु पहिला ज्याला मजदूरी गरेर पाल्थे, अहिले भने गाउँभरि मागेर पाल्ने गरेको बाजे अर्जुनले बताउनुभयो । “सबै सानै छन्, जेठी करुणा गाउँकै सत्यवादी मावि कक्षा २, माइली कोपिला नेपाली कक्षा १ मा पढ्ने गरेकी छन्, बाँकी भने सानै रहेका छन्”, उहााँले भन्नुभयो ।
अर्जुनको परिवारले माथिल्लो जातिको काम गरेवापतको अन्नले केही दिनलाई खान पुुगे पनि अहिले भने परिवार पाल्न निकै समस्या भएको बताउनुभयो । वडाध्यक्ष महतले भन्नुभयो, “आफूहरुले पनि कहिलेकाहीँ खाद्यन्न मिलाउने गरिरहेका छाँै, यिनीहरुको पढाइ त टाढाको विषय हो छाक टार्न पनि समस्या भएको छ, यी साना बालबालिकाको सहयोगका लागि पहल गर्नका लागि आग्रहसमेत गरेका छौँ ।”
नगरपालिकाको महिला तथा बालवालिका शाखा प्रमुख केशरी रोकायाले त्यस्ता अलपत्र परेका बालबालिकालाई यो आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति रु एक हजार सहयोग गरेको बताउनुभयो । “युनिसेफको सहयोगमा रु एक हजार सहयोग गरेका छौँ, बाँकी नगरपालिकामा कोष स्थापना हुन लागेको छ, त्यसपछि सहयोग गर्न सकिने छ ।”
Prevबिहिबार कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ?
Next२१ महिनाने बालक उपचारको क्रममा निधन
आज थप सात सङ्क्रमितको मृत्यु, २६ बर्षका युवक पनि हारे कोरोनासंग
राजेन्द्र महतोको मन्त्री पद हेलिकोप्टरमा उड्दा-उड्दै चैट भएपछि…
हरी उदासीको बारेमा पुन्य गौतमले पहिलो पटक मुख खोले,हरी उदासि,प्रतिमा तामाङ र सबिता भट्टराईलाई म मिलाउछु (भिडियो सहित)
आमा आमा बिहे गर्ने शरिनको आमा बारे गरिएको कुरा के हो ? पुण्यलाई मु,द्दा हाल्छु भनेपछि खुलाए वास्तविकता (भिडियो सहित)